Muxuu dareenka qabow marka barafku u yaraadaa? | Saadaasha Shabakadda
Waa xaqiiqo in marka uu baraf da'o dareenka qabow uu yaraado. Ka fog inuu ahaado uun dareen uun, waa xaqiiqo dhab ah, heerkulka ayaa kor u kaca, taasi waa sababta uusan qabowgu ahayn, maxaa yeelay runti ma qabato. Sidee ku dhici kartaa haddii barafku si sax ah u da'o markuu qabow yahay? Aynu marka hore waxoogaa aragti ah ka qaadanno arrinta.
Marka barafka ama barafka dhalaalaan, kuleylka ayaa loo baahan yahay in lagu daro nidaamka. Taasi waa, kuleylka isku dhafan wuxuu keenaa heerkulka inuu kaco oo biyuhu ay ka gudbaan adag oo ay u noqdaan xaalad dareere ah. Hadda, habka dib u dhaca, ee ah in biyaha laga beddelo dareeraha oo loo beddelo xaalad adag, waa in lagu sii daayo kuleylka nidaamka. "Kuleylka" biyahaas oo ku jira xaalad dareere ah ayaa la siidaayaa, taasoo ka dhigeysa inay biyuhu xaalad adag ku jiraan. Sidaas darteed, kuleylka xad-dhaafka ah waa in laga saaraa oo nidaamka ka baxaa, waana xilligaas sameynta sidaas waxay kordhisaa heerkulka inta barafku da'o. Tani waa muhiim, kaliya markay howshu socoto, maxaa yeelay mar haddii kuleylka la sii daayo oo barafku istaago, qabowga ayaa adkaanaya, waana marka barafka istaago in heer kulka uu hoos u dhici doono.
Xuquuqda kahortaga Isagoo si qoto dheer u eegaya
Marka deegaanku ka hooseeyo 0ºC, waxaan leenahay marinka ay biyuhu bilaabi karaan inay barafoobaan. Laakiin, si loo sameeyo baraf baraf ah, tamarta kuleylka ee la bixiyo waxay u dhigantaa 80 kalori midkiiba. Maaddaama kuleylkaas uusan urursaneyn, wuxuu ku faafaa inta hartay hawada qabow. Markay ku dhacdo malaayiin baraf ah, waxay sababtaa kor u kaca heer kulka. Xuquuqda xiisaha leh?
Marka runtii qabow yahay, way ku adag tahay barafkeeda haddii aad horeba u sameysay Ka sokow. Haddii hoos u dhac weyn ku yimaado heerkulka, barafka ayaa u badan inuu soo baxo, kaas oo inta badan ka yimaada uumiga biyaha. Laakiin haddii uu horay u barafoobay, uumiga biyuhu wuxuu isu beddelay baraf. Sidaa darteed, marka ay aad u qabow tahay, uumiga biyaha ee ku jira jawiga waa mid aad u hooseeya ama ficil ahaan aan jirin.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Kala bixid » Muxuu dareenka qabow marka barafka barafku u yaraadaa?